သနပ်ခါးမေ: October 2014
By **~ မြတ်ကြည်~** 1:49 AM Tag posts, မြတ်ကြည်၏ စုံစီနဖာ
ဒီတစ်ခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဒီတလော မြတ်ကြည်သဘောကျနေတာလေးတွေကို စုပြီးရေးမလားလို့...
ဝါလ ကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ်ဆိုတော့ ပထမဆုံး ရောက်လာတာ ဖိတ်စာဖိတ်စာပေါ့။ ဖိတ်စာတွေ က ဟိုးအရင်ကထက် ပိုပြီး creative ဖြစ်လာကြတယ်။ ညပွဲဖိတ်စာမှာ suit ရယ်၊ ဂါဝန်လေးရယ်၊ Glitter bow လေးကပ်ထားတာ ချစ်စရာလေး။
လက်စွပ်လေးတွေ သုံးကွင်းတွဲရောင်းတာတွေ့တော့၊ ပီစီပါစာကို မကြည့်ပဲ မနေနိုင်တဲ့ ကိုယ်က၊ လိုလည်းလိုချင်၊ ပိုက်ပိုက်ကုန်မှာလည်း စိုးတော့၊ ချေတုံချတုံနဲ့။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံ ကိုယ်သုံးတဲ့ အရွယ်ရောက်လာတော့ အဲလိုပဲ။ မကြည့်ရက်တော့တဲ့ နောက်ဆုံး အဖွားက ကောက်ဝယ်ပေးရော။
ကျူးဂျေး Grandma. ကောင်းကောင်းဝတ်ပါ့မယ်။ :P
ဟိုနေ့က အလုပ်က အစ်မက လက်သည်းနီ ဆိုးချင်တဲ့ သူ ဆိုးလို့ရအောင် သယ်လာပေးတယ်။ တစ်ဘူးလုံးက အလှတွေချည်းပဲ။ မင်္ဂလာဆောင်သွားဖို့ရှိတော့ ဝတ်ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ အရောင်က အနီရောင်ဖြစ်နေတာနဲ့ အောက်ခံကို ကြက်သွေးရောင်ဆိုး၊ လက်ထိပ်ကို ရွှေရောင် လေးတင်လိုက်တယ်။
ဒါက ညစာကျွေးပွဲ တက်တုန်းက ဝတ်သွားတာ။ ဈေးကြီးမယ် ထင်ရပေမယ့်၊ လုံးဝမကြီးဘူး။ Vivala က ဝယ်တာ။ Under 20 USD မထင်ရဘူး ဟုတ်။ :) (ပွဲတွေ ဆက်နေတာနဲ့ လူလည်း ဖောင်းကား)
မြတ်ကြည်လက်ရာ။ တူးနား ကို ပြောင်းဖူး၊ မုန်လာဥနီ၊ olive လေးနည်းနည်းထည့် မေရို နဲ့နယ်ပြီး ပုံလိုက်ရုံပဲ။ အရမ်းခက်တယ်။ :P
သူများတွေ challenge ခေါ်ရင် ပို့စ် ပြန်တင်ပြီး challengeကျ ပြန် မခေါ်ဖြစ်ဘူး။ ဒီ တစ်ခါတော့ ရေးရကျိုးနပ်အောင် ခေါ်လိုက်မယ်နော်။ October Favorites ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ ဒီ တစ်လ အတွင်း သဘောတွေ့နေတဲ့ ဘယ်အရာမဆို ရေးလို့ရပါတယ်။
သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့လေး ဖြစ်ပါစေရှင်။ :)
By **~ မြတ်ကြည်~** 9:37 PM တိုတိုထွာတွာမှတ်စရာ
ဈေးကြီးကြီး အိတ် မို့လို့ တခြားအိတ်တွေ ထက် ပိုကြာကြာခံတယ် ဆိုတာမရှိပါဘူး။ သူလည်း သူ့ အလျောက် ပျက်စီးတတ်တာပါပဲ။ သိန်းချီပေးပြီးမှ တန်အောင်တော့ ကိုင်ရမှာပေါ့နော်။ အိတ်တွေကို ကြာကြာ အထားခံအောင် ထားသို ထိန်းသိမ်းနည်းလေးတွေ ကြည့်ရအောင်နော်။
အိတ်ကို ခဏပဲ ထုတ်ကိုင်တဲ့ အချိန်ထက် သိမ်းထားမယ့် အချိန်က ပိုများမယ်ဆို ဒီ တိုင်းကြီး သိမ်းထားရင် ကြာလာတာနဲ့အမျှ အိတ်ကပြားပြီး ခေါက်ရိုးကျိုးသွားတတ်ပါတယ်။ မသုံးတော့တဲ့ ပလပ်စတစ်အိတ် ၄ ၅ လုံး ဖြစ်ဖြစ် မဝတ်တော့တဲ့ အနွေးထည်ဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြီး သိမ်းရင် ပြန်ကိုင်တဲ့အခါ ပုံစံမပျက်ပဲ ဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်တာပေါ့။
အိတ်တွေ ဝယ်တဲ့အခါ သူတို့ကိုထည့်တဲ့ အိတ်လေးတွေပါလာတတ်ပါတယ်။ သူ့ထဲထည့်ထားရင် ဘေးမှာထားတဲ့ အိတ်အချင်းချင်း ထိတာ ပွန်းတာ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ နောက်ပြီး အဲ့ထဲမှာ တခါတလေ snack ထဲမှာပါတဲ့ ရေငွေ့စုတ်တဲ့ အိတ်ကလေးတွေ ထည့်ထား
လိုက်ရင် ဇစ် တွေ ချိန်းတွေ သံချေးမတက်နိုင်တော့ပါဘူး။
အိတ်ထဲမှာ စုံပလုံစိအောင် မိတ်ကပ်တွေ၊ hand cream တွေ ပစ်ထည်၊ အဖုံး လုံအောင် မပိတ်မိလိုက်လို့က သွားပြီ သွားပါပြီ။ :P ယိုဖိတ်နိုင်တာဟာလေးတွေကို သပ်သပ် ဇစ်အိတ်သေးသေးလေးနဲ့ ထည့်ထားလိုက်ရင် အိတ်ထဲကို တိုက်ရိုက်ယိုဖိတ်တာလည်း ကာကွယ်၊ ဣစ္ဆသရ အိတ်ထဲကနေ လိုချင်တာရှိတိုင်း မွှေနှောက်ရှာရတဲ့ ဘဝက ကျွတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ :)
သားရေ leather အိတ်တွေ အချိန်ကြာလို့ အရောင်မထွက်တော့ရင် ဟင်းရွက်ဆီနဲ့ တိုက်ပေး လို့ရပါတယ်။ အသစ်တိုင်း ပြန် တောက်ပြောင်သွားမှာနော်။
အဖြူရောင် အိတ်တွေ၊ အရောင်နုနုတွေ ကိုင်ရင် ကျွန်မတို့ အရမ်းသတိထားရတယ်။ ဟိုဟာနဲ့ စွန်း ဒီဟာနဲ့ ပေဆို၊ သိပ်သိသာတာပေါ့။ Rubbing alcohol လေး ဆောင်ထားရင် ဘာပဲပေပေ အလွယ်တကူဖျက်လို့ရပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေရော အိတ်အတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ရှိလား? ရှိရင် ဝေမျှပေးသွားပါဦးနော်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 3:46 AM Website လမ်းညွှန်
ဝါကျွတ်ပြီဆိုတော့ မင်္ဂလာဆောင် ရွှေလက်တွဲ ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြလောက်ပါပြီနော်။ တချို့တွေလည်း ပြင်ဆင်ပြီးလောက်ပြီ။ ရေးတာ နောက်များကျနေသလား မသိဘူး။ :P မင်္ဂလာဆောင်အတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်တဲ့ အရာလေးတွေကို စုဆောင်းပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းထဲ မင်္ဂလာဆောင်မယ့်သူရှိရင်လည်း ကူညီလို့ရတာပေါ့။ :)
အရင်ဆုံး ကိုယ် ဘယ်လို မင်္ဂလာဆောင်မျိုးဆောင်ချင်သလဲ ? ဘုန်းကြီးကျောင်းအလှူလား၊ စုလျားရစ်ပတ် လား၊ ဟိုတယ်မှာ ဧည့်ခံပွဲလား၊ မြန်မာလိုလား၊ အင်္ဂလိပ်လိုလား၊ ညစာလား၊ outdoor wedding လား ပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်တာတွေက မတူနိုင်ပါဘူး။ လိုအပ်တာတွေများလေလေ ပြင်ဆင်ချိန် ပိုများလေပါပဲ။
မင်္ဂလာဆောင် တစ်ခုအတွက် စဉ်းစားကြပြီဆိုပါစို့။ လိုအပ်မယ့် အရာလေးတွေ ချ ရေးလိုက်ရအောင်နော်။
1. ဘိတ်သိက် ဆရာ
2. အရံ၊ ပန်းကြဲ၊ ဗန်းကိုင် + ဝတ်စုံ
3. ပန်း / ကား အလှဆင်
7. pre-wedding ဓာတ်ပုံ
တော်တော်များများကို အနည်းဆုံး သုံး လလောက် ကြိုပြီး လုပ်ထားတာ ကောင်းပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်များတဲ့ တချို့ နေရာတွေဆို လိုချင်တဲ့ ရက်ကို နှစ်ပေါက်အောင် ကြို လုပ်ရတာတွေရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် စနေ၊တနင်္ဂနွေတွေ။ Pre-wedding ဆိုလည်း ပြင်ပြီး board ထောင်တဲ့ ဓာတ်ပုံထွက်ဖို့ တစ်လခွဲလောက်ကြာပါတယ်။
အဲလိုပဲ ပွဲနေ့မတိုင်ခင် မိတ်ကပ်ဆရာနဲ့ ညှိပြီး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပုံထွက်အောင် ကြိုပြင်ကြည့်၊ တကယ့်နေ့မှာ၊ လိုချင်တာ တခြား၊ ထွက်လာတာ တစ်မျိုး မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ ကိုယ်က အဲဒီနေ့အတွက် မင်းသမီးလေ။
ဝတ်စုံဆိုရင်တော့ ပွဲနေ့မတိုင်ခင် တစ်ပတ်မှာ fitting ပြန်ချ ဖို့လိုလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ဘယ်လောက် ကြိုချုပ်ချုပ် ဝလာတာတို့၊ ပိန်သွားတာတို့လည်းရှိသေးတယ် မဟုတ်လား?
2. မဖြစ်မနေတွက်ရမယ့် Budget
မင်္ဂလာဆောင်တာ မိန်းကလေးတွေအတွက် တစ်သက်မှာ တစ်ခါဆိုတော့ အားလုံးက perfect ဖြစ်ချင်ကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မင်္ဂလာဆောင်တာ တစ်ရက်တည်းပြီးပေမယ့် နှစ်ယောက်ဘဝက တစ်သက်လုံး ဆက်လျှောက်လှမ်းရမယ့် ရေရှည်စီမံကိန်း တစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် စုထားတဲ့ အထဲက ဘယ်လောက်ကို မင်္ဂလာဆောင်အတွက် သုံးမလဲ၊ ဘယ်လောက်ကို နောင်ရေးအတွက် ချန်မလဲစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။
ကိုယ် ကန့်သတ်ထားတဲ့ amount ကျော်နေပြီဆို ဘယ်နေရာ လျှော့မယ် စ တာတွေ eg. ဟိုတယ်မှာ လူ ၄၀၀ အစား ရင်းနှီးတဲ့ လူ ၂၀၀ ကိုပဲ လျှော့ဖိတ်မလားပေါ့။
3. အကူအညီ ယူပါ။
မင်္ဂလာမဆောင်ခင် တစ်ပတ်လောက်အလိုဆို အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်နေဖို့ ကောင်းနေပါပြီ။ တကယ့်နေ့လည်း ရောက်ရော ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် ခြေကုန်လက်ပန်းကျပြီး မျက်တွင်းဟောက်ပက်နဲ့ဆို ကြည့်လို့မကောင်းပါဘူး။
ပြင်ဆင်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်တိုင် အကုန်လိုက်လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ Best man တို့ သတို့ သမီးအရံတို့ က ဒီအတိုင်း ထားတာမှ မဟုတ်ပဲနော်။ မိဘမောင်နှမတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေက ဒီလို ကိစ္စတွေဆို ဝိုင်း လုပ်ချင်လွန်းလို့။ အဲလို အတူတူ လုပ်တာက သူ့ မိသားစု၊ ကိုယ့် မိသားစု၊ သူနဲ့ ကိုယ့် အသိုင်းအဝိုင်း ရင်းနှီးမှု ပိုလာစေပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ သိပ်အပင်ပန်းခံစရာမလိုပဲ wedding planner တွေလည်းရှိပါတယ်။ တချို့ တွေမှာ သူတို့ အတွက်က co-operative ဈေးတွေ နဲ့ရတာမို့ တခါတလေမှာ ပိုသက်သာတာတောင်ရှိပါတယ်။
မလိုဘူး ထင်ရင်ထင်လိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ ဟိုဘက် ဒီဘက် တကြပ်ကြပ် ဖြစ်ဆုံး အချိန်က ဒီလို အချိန်ပါ။ သူတို့ မဆောင်ပေးရတိုင်းချဲ့တယ်တို့၊ ငါတို့မိန်းကလေးရှင်က ဒီလောက်တော့ တောင်းဆိုရမှာပေါ့တို့ ဘာတို့ပေါ့။ နှစ်ဦးစလုံး ဘယ်ဘက် ပါရမယ်မှန်းမသိ ခေါင်းစားရတာပေါ့။ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကိုယ့်မို့ နှစ်ဦးသဘောအတိုင်း သင့်တော်သလိုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကြိုပြောထားတာ အန္တရာယ်ကင်းတယ်။ ဆောင်ပြီးရင် ဘယ်သူ့အိမ်မှာနေမယ်၊ လစာကို ဘယ်လောက်ကို အိမ်အတွက်သုံး၊ ဘယ်လောက်ကို မိဘအတွက်၊ စတာတွေလည်း ကြိုပြီး ညှိထားဖို့လိုပါတယ်။ နို့မို့ဆို honey moon က ပြန်တာနဲ့ စ ရန်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ :D
5. အပိုလက်ဆောင် :)
နေရာ၊ အကျွေးအမွေး၊ ဝတ်စုံ၊ ဓာတ်ပုံ ကနေ ပျားရည်ဆမ်းခရီးအထိ စုံစမ်းလို့ရမယ့် ဖုန်းနံပတ်လေးတွေကို ဒီဝါကျွတ်လက်ဆောင်အနေနဲ့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်နော်။ ^__^
ကိုယ့်အလှည့်ကျရင် အသုံးဝင်ရင် ဝင်မှာမို့ save ထားဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ :D
သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။ :)
Please visit http://www.facebook.com/thanakharmay for more updates
Photo Credit: Susan's wedding guide >>
(မင်္ဂလာဆောင်အတွက် လမ်းညွှန်စာအုပ် myanmar)